Biyo-baxa ugu weynaa ee tobanka sano wuxuu dhacayaa Valencia | Saadaasha Shabakadda
Biyo-baxa ugu weynaa ee tobaneeyo sano wuxuu dhacayaa magaalada Valencia
Sawirka - Pau Díaz
Nofeembar waa bil aad u xiiso badan marka laga eego dhinaca saadaasha hawada: jawigu waa degan yahay iyo dhacdooyinka roobka ee ay weheliso duufaanku waxay daawasho u yihiin taageerayaasha iyo khubarada berrinka. Laakiin sidoo kale waxay leedahay dhinaceeda xun, sida laga dareemay lagana dareemay magaalada Valencia xalay.
Cajiib 152 litir halkii mitir oo laba jibbaaran ayaa ku dhacay saacado yar gudahood, kaasoo sababay xiritaanka tunelada, jidadka hoose iyo jidadka. Waxay ahayd biyo xireenkii ugu weynaa tan iyo bishii Oktoobar 11, 2007, markii ay dhacday 178'2l / m2.
Sawir - Francisco JRG
Duufaantu, oo ku sii sugnayd meel u dhow Valencia, ayaa ku dhacday bulshada gelinkii dambe ee shalay. Qiyaastii sagaal saac ayaa ay sii xoogeysatay, oo afar saacadood ka dib ay mar kale sii xoogeysatay, taas oo waxay sababtay in ka badan nus kun wicitaan 112. Laakiin ma aha oo kaliya inay ka tagtay biyaha, laakiin waxaa la socday boqolaal raajo oo iftiiminaya cirka habeenka: ilaa 429 ayaa ku soo daatay kaliya magaalada Valencia, wadar ahaan 2703 oo ka sameysay dhamaan bulshada reer Valencian, sida ku cad xogta wakaalada saadaasha hawada ee gobolka (AEMET).
Roobka ayaa ahaa mid aad u xoogan oo Xarunta Isuduwidda Degdegga ah ayaa soo saartay xaalad eber iyo feejignaanta biyaha ee roobka gobolka l'Horta Oest iyo magaalada Valencia lafteeda. Waa maxay xaaladda degdegga ah 0? Asal ahaan, waa digniin la bixiyo marka ay jirto halista qatar ama waxyeelo suurtagal ah, sidii dhacday.
Sawir - Germán Caballero
Jidadka daadadka iyo wadiiqooyinka, baabuurta ku xaniban ama ku dhowaad daadad, ... xitaa xarumaha caafimaadku waxay lahaayeen dhibaatooyin daran, sida Isbitaalka Clínico de Valencia, oo ay soo gaareen daadad daran.
Duufaanta, in kastoo ay muhiim ahayd ma uusan keenin dhimashada qof bini aadam ah sidoo kale ma jiro wax dhaawac ah, taas oo marwalba war wanaagsan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » Biyo-baxa ugu weynaa ee tobaneeyo sano wuxuu dhacayaa magaalada Valencia
Tuubada biyaha ee cajiibka ah ee xeebta Valencia
Sidee xooluhu u saameeyaan deegaanka?